Kala Bixitaanka Jaranjarooyinka - Ellicott Swinging Dragon® Dredge Line
Taxanaha 360SL Swinging Dragon® Dredge
Taxanaha 860SL Swinging Dragon® Dredge
& Si Fudud Oo Loogu Shirto
Markii ugu horeysay ee Ellicott brand® swinging jaranjarada dardge waxaa markii hore la qorsheeyay oo la dhisay 1940-yadii. Ceelka ayaa markii hore loogu talo galay in lagu qodo marin biyoodyo aad u cidhiidhi ah oo ay ku noolaan karaan dadka caadiga ah. Maanta Ellicott waxay sii wadaa inay soosaarto oo ay soosaarto 8 ", 12", iyo 14 ″ Swinging Dragon® Dredges oo si sahlan loo qaadi karo isla markaana laga heli karo balacyo ballaadhan oo sax ah.
Loogu talagalay Ugu Dambeyn
Qaab-dhismeedka biyo-mareennada culus-culus ayaa loo dhisay inay sii socdaan sannado badan isla markaana ku habboon deegaanka, kanaalka, biyo-mareennada, iyo carrada iyo mashaariicda laxiriira ee quruxda badan. Jaranjarooyinkayaga wareega ayaa awood u leh inay kala baxaan noocyada ciidda isku dhafan iyo ashyaa'da adag sida dhoobada iyo weelka.
Ellicott's line-ka wax soo saarka qulqulaya ayaa bixiya qalab kala duwan oo waara sida Ellicott Series 360SL Swinging Dragon® Dredge. Hoos-u-dhacan waxaa lagu qalabeeyaa koontaroollo elektaroonik ah oo loogu talagalay hawlgalka qoditaanka saxda ah. Ma waxaad raadineysaa ceel fudud oo la isku soo uruurin karo? Markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad tixgeliso Ellicott 460slm wareejinta babaarka kaas oo si fudud loogu soo ururin karo qalab gacmeed iyo wiishashka badda. Loogu talagalay hawlwadeenka khibrada leh ee qodista, Ellicott Taxanaha 860SL Swinging Dragon® Dredge wuxuu awood u leeyahay inuu qodo moolka illaa 30 ′ (9.1 m) wuxuuna u adkeysan karaa xaaladaha xun.